साढे तीन अर्ब कूल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने शिखर इन्स्योरेन्सको मुनाफा ४७ करोड, अन्य सूचांक कस्तो ? – Insurance Khabar
साढे तीन अर्ब कूल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने शिखर इन्स्योरेन्सको मुनाफा ४७ करोड, अन्य सूचांक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७६, बुधबार ११:१३
काठमाडौँ । शिखर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म तीन अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ३९ हजार ५६३ रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आवको समिक्षा अवधिमा कम्पनीले तीन अर्ब ३३ करोड ६७ लाख ७७ हजार ४८६ रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
आव २०७५/७६ को चौथो त्रैमासमा ४७ करोड २९ लाख ८० हजार ७७० रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । साढे तीन अर्बभन्दा बढि कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीको मुनाफा ४७ करोड रहेको छ । अघिल्लो आवको समिक्षा अवधिमा कम्पनीले ३९ करोड ९२ लाख ७४ हजार ७८३ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यस वर्ष नाफा केही बृद्धि भएको देखिएको छ ।
कम्पनीको जगेडा कोष ४५ करोड ७० लाख पुगेको छ । अघिल्लो आवको समिक्षा अवधिमा २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । चुक्ता पूँजी एक अर्ब पाँच करोड ७३ लाख रहेको कम्पनीको बीमा कोषमा एक अर्ब पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । अघिल्लो बर्ष ८२ करोड रुपैयाँ रहेको बीमा कोषमा यस वर्ष बृद्धि भएको देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको महाविपत्ति कोषमा सात करोड ३३ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ ।
त्यस्तै चौथो त्रैमासको अवधिमा कम्पनीले एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको समिक्षा अवधिमा कम्पनीले एक अर्ब ५९ करोड १९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
समिक्षा अवधीमा कम्पनीले तीन लाख ३ हजार ५९१ बीमालेख जारी गरेको छ भने ६४ हजार ९७४ बीमालेख नविकरण भएका छन् । अघिल्लो आवको समिक्षा अवधिमा कम्पनीमा तीन लाख २ हजार ४३४ बीमालेख जारी गरेको थियो ।
यस्तै चौथो त्रैमासको अवधिमा कम्पनीले एक अर्ब ८५ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीले ८१ करोड १६ लाख ६१ हजार ७६१ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अघिल्लो आवको समिक्षा अवधिमा कम्पनीले एक अर्ब ८६ करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको थियो । भने ६५ करोड ४१ लाख बराबरको कुल दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ४४ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ २५० रुपैयाँ १७ पैसा छ ।
बीमा पेशाको हकहितको लागि सम्पुर्ण अभिकर्ता एकजुट हुन आवश्यक : तिवारी
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नारी बचत खाता संचालनमा
कुमारी बैंकले ल्यायो डिजिटल च्यालेन्ज योजना, विजेताले आइफोन १२ प्राप्त गर्ने
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा रोजगारीको अवसर, आवेदन दिन अब दुई दिन मात्र बाँकि
सखुवाको प्रसौनीमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा संचालनमा
मिर्मिरे लघुवित्तको साधारण सभा चैत १८ गते, बुक क्लोज कहिले ?